In Somaliland region kids as young as 6 injected with clan poison - Politics - Somali Forum - Somalia Online
Abtirsiintu waa dhaqan Somalidu leedahay sida geeloodu sumadda u leeyahay. IImo aan abtirsiintiisa aqoon Somaliba ma aha. Maxaan kuu sameeyaa hadaad adigu Garanwaa aan abtir-siiyo lahayn tahay. Reerka aad sheegato oo (reerba wax buu noo qaabilsanyahee) ah madaxii duriyadda miyaanad baran abtirsiintiisa si aad ugu dhul marto?
Barwaaqooy, maanta uun buu si fiican isugu cadeeyey in uu yahay "darbi-laga-hel" boqol-kalana ku murantay, mar haduu yidhi abtirsiimadii ayaa ah "Clan Poison". Waakaas, Sheegato aan biyo-is-marin oo Ina-Gumeed ah.
Makula tahay, Barwaaqooy, Inaadeer, in nin Sacad-Yonis ahi uu abtirsiimo "clan-poison" ku sheegi lahaa?
Walee, Ina-Aabihii-Garanwaa, ama "Cambarro-korsateyga" halkan nala joogaa waa aan u khajilaa sida ay lafta uga gashay Ina-Gumeednimadda aan ka xishooneynin in uu xataa sheegto reero kale oo xaqanaas. Waase ayaandaradii.
31 minutes ago, Oodweyne said:
Makula﻿ tahay, Barwaaqooy, Inaadeer, in nin Sacad-Yonis ahi uu abtirsiimo "clan-poison" ku sheegi lah﻿aa?﻿
Maya Ilama aha. Calaamadaha sumad-laawaha lagu garto iga dheh .
Wa ruun lkn is it necessary to teach a child at 6? what is next are they going to teach her to hate Mogadishu.
Barwooqooy, maanta uun buu si fiican isugu cadeeyey in uu yahay "darbi-laga-hel" boqol-kalana ku murantay, mar haduu yidhi abtirsiimadii ayaa ah "Clan Poison". Waakaas, Sheegato aan biyo-is-marin oo Ina-Gumeed ah.
Marwo Oodweyne bal ii sheeg inantan yar maxay ka faedaysa qabilkeeda inay ogato at that age? qabilka miyana ahayn tii lagu dilay adeereed ee Ceel Afweyn. Faedo ma leh marka.
Ina-Gummeed Sheegato ah, oo darbi-laga-hel ah, jawaab ma mudna. Hase-Ahaatee, maalinta aad nin ragga noqoto, oo aad kasoo gudubto sheegashadda aad isku xoqeyso Reerka sharafta leh ee Sacad-Yonis, ee beesha Habar-Yoonis kasoo jeeda ee aad magacooda iyo milgahooda aad ka "sineysaneyso" aad iska dayso, ayaan jawaab "shaaficiso-ah" ku siin.
Inta kahoreysase, mid kaloo ah Ina-Gummeed sidaada oo kale ah, oo waliba ah "Af-Qushuushle-ambada", oo inaadeertiina niiko ugu jiro Xabashagii ku gumeysanayey Baydhaba, oo isna halkan uu "Af-ka-Niikis" uu ugu jiro ama ugu hayo "xerta tuugadda" ah ee Villa Somalia fadhida ee "jeeb-buuxsiga" halkaas u joogta, la sheekeyso oo la dhoola-cadee kaas oo kale.
Maadaama aanad hadal rageed istaahilin, Intaas ma fahantey, Ina-Abiihii-garanwaayow?
Marwo Oodka waba isku dhexyacday suasha lagu waydiiyay iyo waxad ku matagday maba iis laha.
^^^^ Horaan kuugu idhi:
"......Ma Gudboona Gunnimo Nimay Gayaankii Tahay Iyo Gartii-yaqaan Go'aansada Gogol Iyo Geed Wixii Lagu Gorfeeyo....."
21 minutes ago, Oodweyne said:
Marwo oodka xikmadi ba ka guurtay siida uu noqotay kaboqadaha jeegaanta.
Aha, naxli-hadle, "Cambarro-Korsatey," dad kalana iska sheegtey, oo "sumad-laawe-ah", ayaa xigmad la'aan dad kale ku sheegaya. Waakaas, "nasakhnimadda", xadhko-xidha ama garasho-xakameysa, weydaa, sida ay u ekaato.
A lot of Somalis are shocked after seeing this video. It seems strange teaching something useless to a child at 6.
Saalaxo waa daad ayaa qaaday, kolba sidii lax muqlaysan waa kan geed madaxa ku dhuftay.
Bal ka warama inta laamood ee la go'day...
1. Ceel Afwayn
2. Mustafe Martin
3. Tukaraq oo Garoowe taageeray
iyo tan ugu danbaysay ee Col. Caare oo sheekadaasi soo af xidhantay.
Wuxu ilaaway in dadka reer Somaliland si kasta oo isku khilaafaan oo car iyo car iyo wir iyo wir joogto, hadana kolkay noqoto arimaha qaranka ay ka midyihiin oo wixii dhex dooda ah meel iska dhigaan.